Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Andry Rajoelina: Ho fiarovan’ny fitondrana Hvm ny ainy, hono!
Raharaha Andry Rajoelina: Ho fiarovan’ny fitondrana Hvm ny ainy, hono!
Isan’ny vaovao nafampana tamin’iny faramparan’ny herinandro lasa iny, nanomboka ny zoma teo, ny raharaha nisakanan’ny fitondram-panjakana an’i Andry Rajoelina tsy ho afaka niazo an’i Mahajanga. Efa narahintsika tamin’ny haino aman-jery isan-tokony teto ny fizotr’izany, dia ny fanakanana ny fiaramanidina tsy ho nahazo niainga teny Ivato, ankoatra ny didy fandrarana an’ilay lanonam-pitokanana navoakan’ny Prefen’i Boeny, izay efa namoahan’ny fitsarana tany Mahajanga didy koa moa tamin’iny zoma iny ny fahafahana manatanteraka ilay lanonana.
Fa teo anilan’izany rehetra izany, ny mpanao gazety amin’ny haino aman-jery tsy miankina iray eto andrenivohitra dia nahazo loharanom-baovao iray avy amin’ny mpitondra fanjakana foibe, ary nambaran’io namana mpanao gazety io tao amin’ny fahitalavitra iasany izany ka ren’ny vahoaka maro, fa hoe “ho fiarovana ny ain’i Andry Rajoelina mianakavy fa misy tranga mety hihatra aminy no antony nandrarana ny fiaramanidina tsy ho afaka mitondra azy hiazo an’i Mahajanga.”
Na tsy niteny mivantana aza ilay namana mpanao gazety dia mby an-tsaina avy hatrany ny hoe “nisy fihokoana hitifitra ny fiaramanidina hitondra an’i Andry Rajoelina mianakavy izany tamin’iny zoma iny”?
Nazara roa ny fisainan’ny maro. Tao ny nandika izany ho tetika hialan’ny mpitondra jadona andraikitra sy hanamariny tena tamin’ny jadona nampihariny. Fa teo koa ny hoe “sao tokoa ka nisy izay fikasana hitifitra ny fiaramanidina tokony hitondra an-dry Andry Rajoelina mianakavy izay”.
Ndeha àry hinoana fa marina ity petra-kevitra farany hoe “ho fitandroana ny ain’i Andry Rajoelina no nandrarana ny tsy nahafahan’ny fiaramanidina nisidina ity”. Nahoana àry no tsy izy mianakavy ihany no nesorina tao anaty fiaramanidina dia navela nisidina niazo an’i Mahajanga ihany ilay fiaramanidina izay nitondra olon-tsotra maro, hamonjy fotoana any? Etsy an-kilany, moa tsy tompon’andraikitra mivantana amin’ny fihazana an’izany olona mitetika hitifitra an’i Andry Rajoelina mianakavy izany ny fitondram-panjakana? Matoa mantsy resy lahatra amin’ilay loharanom-baovao momba io fitifirana io ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy efa nahazo loharanom-baovao mifamatotra amin’izany koa ry zareo hoe “atsy ananona ry ranona sy ranona no mihoko ho amin’izany”.
Sa re ry zareo mpitondra jadona mihitsy no tompon’antoka tao anatin’izay fikasana hitifitra an’i Andry Rajoelina izay ka tsy azo nandraisana fepetra na ny fisamborana an-dry zareo na ny tokony ho fisakanana izany teti-dromotra izany… dia mba navela nanatanteraka ny diany niazo an’i Mahajanga ry Andry Rajoelina e?
Izany rehetra izany dia tonga amin’ny fitenin-jatovo hoe “fikan’antitra”. Lainga marivo tototra ka aelin’ny akoho tokan’anaka, hoy ny Ntaolo. Teny efa nambaran-dRatsiraka koa izany tamin’ny Repoblika faharoa, ho fanamarinany tena tamin’ny fepetra nampihariny tamin’ny Masina Monja Jaona. Nambaran’ny Amiraly Ratsiraka tamin’izany fa “nisy nikasa hamono i Monja Jaona ka izy Ratsiraka no nandray fepetra ho fiarovany ny ainy”.
Nanambara moa i Andry Rajoelina ny alin’iny zoma iny fa “tsy maintsy ho avy any Mahajanga ary hihaona amin’ny vahoakan’i Mahajanga”. Dia hiarahantsika manaraka eo ny tohin’ny tantara.